အပျိူစင်လက်ဖက်ခူးခြင်း | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
Leaveareply	တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟီနန်ပြည်နယ်၊ မြို့ တစ်မြို့ တွင် အွန်လိုင်းအလုပ်ခေါ်သည့်ကြေငြာတစ်ခုကြောင့် လူအများဆွေးနွေးပြောဆိုဖွယ် အတင်းစကားဆိုဖွယ်ဖြစ်နေခဲ့ ရပါတယ်…
အဆိုပါအလုပ်ကြေငြာချက်အရ အလုပ်လျှောက်ထားသူတွင်ပြည့် 
ခူးရန်ရင်သားအရွယ်အစားဆိုဒ် C ရှိရမည့် အပျိူစင်အမျိူးသမီးများ
အလိုရှိသည်ဟုဆိုပါတယ်…အလုပ်လျှောက်ထားသူများ၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင်လည်း မည်သည့် ဒါဏ်ရာ၊ အမှတ်အသားမျှမရှိရဟုလည်းဆိုပါသေးတယ်…
ရွေးချယ်ခံရသည့် အလုပ်သမားများအား သင်တန်းပေးမည့် အပြင် နေ့ စဉ် ယွမ်ငွေ ၅၀၀ ( ရင်းဂစ်၊ ဒါဟမ်းငွေ ၂၃၂ ကျပ် ) ရရှိမည်ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါတယ်…
၎င်းတို့ ရဲ့ ကြေငြာချက်ဟာ လိမ်လည်လှည့် ဖြား ထားတာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးလို့ ရှုခင်းသာဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကုမ္ပဏီရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ လီယုံ မေးမြန်းရာမှာ အတည်ပြုဖြေကြားခဲ့ ပါတယ်….
ခန့် အပ်ခံရသည့် အလုပ်သမများအနေဖြင့် လာမည့် မေလ ၁၈ ရက်နေ့ အထိကျင်းပပြုလုပ်မည့် လက်ဖက်ရည်အပျိူစင်နှုတ်ခမ်းလက်ဖက် ပြပွဲ တွင်စီစဉ်ကြီးကြပ်လုပ်ကိုင်ပြသရမည့် တာဝန်များလည်းပေးအပ်ခံရဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ပြီးပြောကြားခဲ့ ပါတယ်…
အဖိုဆိုယင်ဖိုတောင်မသန်းဖူးသေးတဲ့ အပျိူစင်လေးများက သူမတို့ ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးများဖြင့် 
ဤကဲ့သို့ လက်ဖက်ရွက်နုနုကလေးများကို ခူးကြရပါတယ်တဲ့ 
အစဉ်အဆက်၊ ဓလေ့ ထုံးတမ်းများအရ ရှင်ယန်းမောင်ကျန် လို့ ခေါ်သည့် အဆိုပါလက်ဖက်များကို အပျိူစင်အမျိူးသမီးများက ၎င်းတို့ ၏နှုတ်ခမ်းများဖြင့် သာဆွတ်ခုးကြရတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်…
သို့ သော်လည်းထိုကဲ့ သို့ အပျိူစင်များက အမှန်တကယ်ပင်ဆွတ်ခူးခဲ့ ကြသည်မှာ ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့ သက်သေမပြနိုင်ခဲ့ ကြပါဘူး….
ပြီးလျှင်ကြိုးနဲ့ လည်ပင်းမှာဆွဲကာ ရွှေရင်အစုံနဲ့ ထိမ်းထားတဲ့ ခြင်းကလေးထဲထည့်ပါတယ်
ခြင်းကလေးထဲကမှတစ်ဆင့် အောက်ဖက်မှာ အိတ်ရှုံ့ ကလေးထဲထည့် ပါတယ်
လက်ဖက်ညွှန့် ကလေးတွေကတော့ မြင်ရတာနဲ့တင်စားချင်စရာပါပဲ။
Credit by : multivitamin
Source : http://www.ministryoftofu.com/2011/04/chinese-job-ad-tea-leaf-picking-girls-have-to-be-virgins-c-cup-and-up/
This entry was posted in ကမ္ဘာ့သတင်း, ကျန်းမာရေး, News and tagged တရုတ်, လက်ဖက်, အပျိုစင်လက်ဖက်ခူးခြင်း, မြန်မာနောက်ဆုံးသတင်းများ, Myanmar News, Myanmar Update News on December 28, 2012 by koshwehtoo.	Post navigation
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ရှိသင့် →